Abakhiqizi Bethango Lokuphepha - Imboni Yocingo Lokuphepha Lase-China & Abahlinzeki
I-Municipal Road guardrail ibizwa nangokuthi i-urban traffic galvanized plastic sprayed steel guardrail. Yinhle futhi inoveli, kulula ukuyifaka, iphephile futhi inokwethenjelwa, futhi intengo iyathandeka. Isebenza ekuhlukaniseni imithambo yezimoto zasemadolobheni, amabhande okuhlukanisa aluhlaza phakathi kwemigwaqo, amabhuloho, imigwaqo emincane, imigwaqo yasemalokishini kanye namasango emigwaqo ekhokhelwayo.
I-Outdoor balcony Safety guardrail zinc steel metal balcony guardrail
I-Zinc steel guardrail ingabonakala yonke indawo empilweni yethu. I-Balcony guardrail ivame ukusetshenziswa. Njengomkhiqizo omusha we-Guardrail, i-zinc steel guardrail ihlanganisa ukuhlobisa nokusebenza, futhi ingahlala isikhathi eside endaweni yangaphandle. I-balcony guardrail isebenzisa kakhulu i-trapezoidal guardrail. Nakuba i-balcony guardrail ingumkhiqizo owenziwe ngokwezifiso, kukhona futhi isethi yobukhulu obujwayelekile kanye nemininingwane embonini.
Ucingo oluvikelayo oluvunguzayo lwentambo enameva lwensingo
Intambo enamemo we-blade yakhiwe nge-blade ne-barbed wire mesh. Ingazivikela, noma imise ucingo oluhlabayo noma ucingo olunemeshi olushiselwe. Lapho upakisha i-razor wire, kulula ukwenza ikhoyili ye-razor.
Idiphu elishisayo lensimbi enamahalavu ensimbi ewutshani waseKraal mesh
Kwezolimo, uthango lusetshenziselwa ukugcina izilwane ngaphakathi noma ngaphandle kwendawo. Zingenziwa ngezinto ezihlukahlukene, kuye ngokuthi indawo, indawo kanye nesilwane okufanele sivinjwe. Isilinganiso sobude bezintango eziningi zezolimo singamafidi angu-4 (1.2 amamitha), kanti kwezinye izindawo ubude nokwakheka kwezibaya ezisetshenziselwa imfuyo kulawulwa ngumthetho.
Ukumelana nokugqwala okuqinile, ukuguquguquka okuhle okuphelele nokuzinza.
Isikrini sensimbi engagqwali esingu-304 esalukwe ngocingo oluhlotshiswe ngocingo olunezikhala
I-Crimped wire mesh iyinetha eliyisikwele elilukwe ngezinto ezihlukene kanye nokucaciswa okuhlukile kwezintambo zensimbi ngomshini oboshiwe bese kuba uhlobo olusha lomshini wokweluka. Inezinhlobonhlobo zokusetshenziswa.
Ikhwalithi ephezulu ephansi ye-carbon steel wire elukiwe Isixhumanisi seChain
I-Chain link, eyaziwa nangokuthi i-hanging mesh, i-diamond mesh.
Lolu hlobo lwe-wire mesh material: ikhwalithi ephezulu yocingo lwensimbi olulukiwe lwekhabhoni ephansi.
Ukwaluka kanye nezici: kwenziwa nge-hook ukwaluka; Ukweluka kulula, kuhle futhi kuyasebenza.
Idiphu elishisayo lesakhiwo esinama-welding mesh
Insimbi engagqwali eshiselwe wire mesh yenziwe ngekhwalithi ephezulu yensimbi engagqwali. Iyakwazi ukumelana ne-asidi ne-alkali, ishiselwe ngokuqinile, inhle futhi isetshenziswa kabanzi.
Izintambo ze-wire mesh ezishiselwe ziqondile futhi zi-wavy (ezaziwa nangokuthi amanetha ase-Dutch). Ngokuvumelana nokuma kwendawo ye-mesh, ingahlukaniswa ngeshidi le-wire mesh elishiselwe kanye ne-welded wire mesh roll.